10 fiican ee filimada Hindiga on youku.com
Toban ugu wanaagsan ee filimada Hindiga on youku
Qaar badan oo idinka mid ah waxaa laga yaabaa galay daawashada filimaanta Hindi on youku. Laakiin mar walba waa dhibaato in la doorto mid ka mid ah ugu cajiib ah oo weyn in lagu bilaabo. Ha welwelin. Waxaad ka heli kartaa 10 filimada ugu fiican Hindi halkan lagu taliyey. Waxaad u socda iyaga u jeclaan.
In this biimayn Tacaddi si ay u arkaan in laba qaybood-a total of dhawaad ​​afar saacadood, tuulo yar oo ku Hindiya waxaa da'ada ay mustaqbalka kulan ee cricket dulma ay Britain. Iyadoo style muusikada xiddiga Bollywoodka ee Amir Khan keenaysaa dadka aad u dhibaataysan oo masaakiin ah in ay kasoo baxdo ciidda, isu keeno koox ka mid ah ciyaartoyda hiwaayadda hor xirfad Ingiriiska, oo leh fursado badan oo u muuqda in ka badan inuu ku guuleysto. Funny, dhaqaaqin iyo soo jiidasho leh si ay u bartaan oo ku saabsan taariikhda Hindiya u ah ee kala qoqobaya iyo dhibaatooyinka bulshada. Tani waa waa daawan filim badan xagga dareenka iyo fikirka ah-oo iska xanaajin goobaha la xidhiidha xaaladda bulshada ee hore India.
Devdas (naaneeso "Dev") ayaa ku soo laabtay guriga qoyska ee India ka dib markii uu dhamaystay waxbarashada sharciga ee England. Waxaa uu ka heli saaxiibkiis carruurnimada, Parvati (oo loo yaqaan "Paro"). Ka hor inta uusan bilaaban Devdas, labada ahaayeen caadi ku dhow, si heer ah in ay muuqatay is weligiis. Inta lagu guda jiro maqnaanshaha Devdas, Parvati sugayay jaceyl; Laftiisa Devdas, inkastoo ay casualness muuqata, waa jacayl xamaasad leh Parvati. Laakiin haatan labada yihiin dadka waaweyn, carqaladaha ku hamineysay kulankii ay ururka, sababtoo ah Parvati ka yimaado qoyska suubban, halka Devdas waa u fududahay. Waa goobtii ka dhaqanka Bollywood ah oo ka hadhay aqoon Yurub inkastoo ay guul aad u weyn oo aan la dafiri karin ee Asia.
Filinkani ayaa sheegay sheekada jacaylka curyaamiyey by Rahul Khanna oo Anjali Sharma. Tina, Rahul naagtiisii ​​oo geeriyooday dhashay gabadheeda Anjali, laakiin isaga tago taxane ah oo warqado. In la soo dhaafay, Anjali ogaada maalintii uu siddeed sano, Tina sheegayaa gabadheeda in ay xambaarsan magacaas xusuustii aabbihiis saaxiib fiican dugsiga sare, Anjali Sharma. Flashback dheer A ka dibna waxay muujinaysaa waqtiga Rahul ah, hoggaamiye urur oo isku badbadalo, iyo Anjali, tomboy dhabta ah, waxay ahaayeen saaxiibadii ugu wanaagsanaa. Anjali ka warqaba jacaylka dareemo in u Rahul marka la kulmay Tina Malhotra, kuwaas oo noqon lahaa xaaskiisa. Quus, carareen aan ka tago Anjali cusub. Back soo gudbinaynaa, wax yar Anjali, sida ay tahay doonista hooyadiis ka muujiyay in warqad, ku dadaaleysaa in ay awood u Anjali si aad u hesho carruurnimada gabar.
Ka dib markii xanuun, Michelle McNally Indho Beeleen oo Dhago markay ahayd laba sano jir. Cope la yeeshaan ilmahooda iyaga oo leh kuwii gudbin karin, waalidka waa clueless iyo siddeed sano maray ka hor inta aysan noqon in Debraj Sahai, macalin ku takhasusay. Xaggeedaan, samir, iyo dulqaadashadaada, ayuu suurtagashay in ay hesho in Michelle si ay u aqoonsadaan erayo si uu u muujiyo la isticmaalayo calaamadaha iyo iyaga siiyaan macne. Michelle iyo reconnects dunida isaga ku wareegsan. Sano ka dib, markii ay qof weyn, Michelle ka heli macalinka uu hore u adag dhacay ee cudurka Alzheimers. Taa baddalkeeda, ayay yeelaysay wax walba oo suuragal u gargaarta.
Veer Zaara-sheegay sheekada Veer Pratap Singh (Shahrukh Khan), Indian ah xabsi ku yaal dalka Pakistan. Dhallinyarada ah qareen A, Saamiya Siddiqui (Rani Mukerji), gabadhii u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, waxay qaadataa kiiskiisa gacanta iyo isku day inaad fahanto wixii dhacay. Marka hore diidan, buug Veer si tartiib tartiib ah oo sheegayaa inuu sheekada oo uu kulan kula Zaara Hayat Khan (Preity Zinta), qof dumar ah oo Pakistani isagu wuxuu samatabbixin shil halis ah. Sasabay by jiidashada iyo taabtay markuu dhibaataysnaa, gargaarka Veer Zaara u yimaadeen Hindiya si ay u gutaan rabitaanka ugu danbeeyay ee kalkaalisada, dambas ku fadhiya uu ku kala firdhiyo dalkiisa.
Aktarro waa hooyo Maarati oo sii fiican tahay in samaynta ladoos iib aheyn kaas oo u qotomiyey ganacsi yar. Laakiin haddii qoyskiisa jecel yahay macmacaanka Aktarro ahaa, waxa aanu haysan wax ka yar jeesi uu la'aanta aqoonta Ingiriisiga, iyo wiiqaysaa iyada kalsooni. Inta ay mudda ah oo dalka Mareykanka ah, waxay go'aansatay inay qaadato koorso oo ku qoran luqadda English ee dadka waaweyn. Ardayda Contact ka soo jeeda oo dhan, iyo gaar ahaan dareenka ah in kuugga Faransiiska, Laurent, ogalaan inay helaan kalsoonida. Shahshi sidoo kale ogaadaan la'aanta ah ee ixtiraamka oo waxaa lagu sakhiray ninkeeda iyo gabadheeda ugu weynaa.
Qaar ka mid ah erayada ma noqon karaa mid ku haboon Karan Shergill (Hrithik Roshan), oo ahaa ina qoys hodan ah, oo ku nool maalin ka maalin, aan hamiga, kaasoo innaga iyo dan berrito ama mustaqbalka. Hal qof ayaa muhiim ah in uu naftiisa waa saaxiibtiis Romila Dutta (Preity Zinta), haweeney dhallinyaro ah oo dhalaalaya iyo hami kuwaas oo aaminsan in maalin maalmaha ka mid la helo hab Karan. Wax walba ayaa isbedeli doona maalinta Karan go'aan ka jajuubi ah si ay ugu biiraan ciidanka. Lakshya ka dhigan soo laabashada Javed Akhtar qoraa 15 sano ah ka maqnaa ka dib markii sida. Waa filim ku salaysan halganka ku wareegsan Xuduuda u.
Gurcharan ku nool guri palatial xaaskiisa iyo laba gabdhood, Lolita iyo Koyal leh, laakiin mar dambe ma uu leeyahay hab uu ku bixiyo uu qoyskiisa. Ka dibna wuxuu go'aansaday inuu reerkiisii ​​u dayn in uu deriskiisa, H.Navin Roy hodan, amaah wax lacag ah ganacsade. H.Navin leeyahay wiil, Shekhar, iyo rajeynayo in dhawaan ay guursadaan Gayetri Tatya, gabadhii la Wadaage hodan. Shekhar iyo Lolita yihiin saaxiibo weligiis. Muddo sanado ah, jacaylka dhabta ah waxaa leh tolmo wanaagsan u dhaxeeya, laakiin H.Navin ma ansixinayso ay idyll. Marka codsiga wiilkiisa, H.Navin bixisaa Lolita shaqo ah sida xoghayso si ay u caawiyaan in qoyskeeda ay u noolaadaan. Wax yar ka aragto in Lolita H.Navin ku talo, fikirka Gurcharan marnaba ka abaal marin kartaa amaah ku saari qoyskeeda iyo beddesho gurigooda hotel raaxo ah. Waa in uu haatan si deg deg ah u dhaqmaan si ay u oggolaadaan aabbihiis u bixisid amaahda ee H.Navin. Inta kale waa sheeko qurux badan.
Marka Munna u guuray Mumbai, Munna sameeyay burcad takhasusay afduubka iyo madax furasho ah dalbaday. Booqashada ugu sanadlaha ah ee waalidka oo uu kiinna hawlaha dhabta ah, burcad den jirsado isbitaalka la Munna waa sarkaal caafimaad oo madax. Inta lagu guda jiro socod ee park ee Mumbai, Hari aabihiis Munna kulmay .. Dr Asthana, saaxiibkey hore hortooda lunsan. Labada nin isku raaceen in Shrinki, gabadhii Dr .. Asthana ka dhigi lahaa naag uga fiican ee ina Hari. Guurka saabsan yahay in la degeen markii Dr .. Asthana ogaado runta ku saabsan Munna. Waxa uu wargelinaysaa Hari waa si xun u niyad. Munna waa naafo. Si aad u kibir cusub waalidkiis, inuu go'aansaday inuu qoro kulliyad iyo aad u hesho shahaado caafimaad. Laga soo bilaabo hogaamiyaha burcad dhakhtar, beddelidda ee Munna waa ka fog cad, gaar ahaan marka Dean of jaamacadda waa ka badan Dr .. Asthana kale ma jiro.
Munaasabadda sanad guuradii 50-aad ee madax-bannaanida Hindiya, Amar (Shahrukh Khan), mid ka mid ah Suxufiyiinta ugu wanaagsan ee raadiyaha "Dhammaan Hindiya Radio", oo la kulmay qof dumar ah oo dahsoon oo ay nafteeda ku baaqay in Meghna (Manisha Koirala). Laakiin waa magaciisa saxda ah? Inta lagu guda jiro safar si Ladakh in shirkadda maxaabiis ahaan, ay lumiyaan hortooda. Amar uu go'aansado inuu ku soo laabto New Delhi, halkaas oo uu ku saabsan yahay in ay guursadaan Preeti. Meghna markii si lama filaan reappears. Amar uu dareensan yahay Meghna la qarsoodi weyn oo ah in ka hortagtaa jacayl kan uu jecel yahay. Indeed, Meghna ayaa howlgalka ku dhammayn lahaa. Waa qayb ka mid ah koox ka mid ah argagixisada isku diyaarinaya weerar ay ku Delhi. Baro Waxaan deggan yihiin howlgalka, laga yaabee soo jiitay nolosha kale oo doonayay in ay qof dumar ah oo dhallinyaro ah jacayl, laakiin iyadu doorasho? ... Amar ugu dambeyntii ogaado waxa qarsoon iyo isku dayo in laga hortago ugu xumaa. Tartanka ka dhanka ah fasaxu!
Windows Movie Kan sameeyey - oo ay taageerto qaabab File
Video Player ee dar-socodka / koronto-tago
ProRes Converter: Si fudud Beddelaan Videos in Apple ProRes
> Resource > Video > 10 fiican ee filimada Hindiga on youku.com